Home | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss | Page 10
Home / Archive by category Home (Page 10)
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya ayaa dib ula noqotey go’aan ay soo saartey 1 Feberaayo oo sheegaya in 21 bisha Feberaayo wixii ka danbeeya la xanabiyo duulimaadyada Muqdisho iyo Hargeysa isaga kala gooshi jirey. Gen. Gaafow Taliyaha laanta socdaalka ayaa sheegay sababta go’aankan ay u gaareen ay ahayd, go’aamo ka soo baxay Somaliland, kaas oo […]
Shacabka Ugandha oo u codeenaya Doorashada Madaxweynaha
Maanta oo Khamiis ah ayey dalka Ugandha ka dhaceysaa Doorashada Madaxweynaha oo uu markii 5aad u tartamayo Madaxweyne Yuweri Musefeni oo dalkaasi kasoo talinayey muddo 30 sano ah. Musefeni oo xilka qabtay bishii Janaayo ee sanadkii 1986dii ayaa la rumeysan yahay inuu weli taageero xoogan ku leeyahay shacabka Ugandha, balse doorashadan ayaa la filayaa inay […]
Xoghayihii hore ee UN-ka Boutros Boutros-Ghali oo geeriyooday
Boutros Boutros-Ghali oo u dhashay dalka Masar ayaa ahaa 93 sano jir wuxuuna ahaa Xoghayihii ugu horeeyey ee Qaramada Midoobay ee kasoo jeeda Qaarada Afrika. Xoghayihii hore Boutros Boutros-Ghali ayaa dhashay sanadkii 1922, wuxuuna waxbarashadiisa kusoo qaatay dalka Masar iyo waliba wadanka France, wuxuuna ahaa khabiir ku takhasusay dhanka Sharuucda Caalamiga ah. Boutros-Ghali ayaa noqday […]
Sharmarke oo Muqdisho kula shiray Wasiiru Dowlaha Ciidamada Britain
Raysul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa maanta kulan la qaatay Wasiiru dowlaha Wasaarada Difaaca ee Britian Penny Mordaunt, Safiirka u fadhida Soomaaliya Danjire Harriet Mathews, waxana ay ka wada hadleen horumarka ay gaartay Soomaaliya iyo doorka muhiimka ah ee dawladda UK ku leedahay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan dhismaha Ciidamadda . […]
Maxkamada dalka Maraykanka ayaa amartay in dalka laga saaro sarkaal ka tirsan ciidamada Qatar oo kamid ahaa saraakiisha lagu tababarayo wadankaasi, kadib markii uu si xun ulla dhaqmay shaqaalaha guriga uga shaqeyn jiray. Sarkaalkan oo lagu magacaabo Hassan al-Homoud oo ah 46 sano jir, ayaa u dhashay dalka Qatar. Xaaskiisa ayaa lagu magacaabaa Saynab al-Hosani […]
IS oo soo bandhigtay wiil 4 sano jir ah oo qarxinaya baabuur lagu dhex xirey 4 maxbuus
Ururka IS ayaa soo bandhigay cajalad muuqaal ah oo laga arkayo wiil 4 sano jir ah oo ka soo jeeda dalka Britain kaasoo qarxinayo baabuur lagu dhex xirey afar ruux oo lagu eedeeyay inay basaasiin ahaayeen. Wiilkan oo IS u bixisay “Jihadi Junior” ayaa hooyasii waxaa ay ku biirtey ururka IS iyadoo hore u ahayd […]
Cudurka ZIKA oo gaaray dalka Shiinaha
Nin u dhashay dalka China oo dhawaan booqasho ku tagay dalalka Latinka ayaa laga helay cudurka Zika. Ninkan oo la sheegay inuu yahay 34 sano jir ku nool magaalada Hong Kong ayaa dhawaan dib uga soo noqday safar uu ku tagay dalka Venezuela halkaasi oo la filayo inuu kasoo qaaday cudurkan ay faafiso kaneecada. Dowlada […]
Syria: Qarax xoogleh oo ka dhacay Dimishiq
Weerar bambaano oo Salaasadii shalay ka dhacay waqooyiga magaalada Dimishiq ee caasimada Siiriya ayey ku dhinteen ugu yaraan 10 ruux. Weerarkan ayaa lala beegsaday goob suuq ah isla markaana ku yaal xarun ay ku nastaan saraakiisha Booliiska, qaraxan ayaa ka dhacay xaafada Masaken Barza oo ah goob ay ku yaalaan xarumo badan ee dowlada Siiriya. […]
Koox Eritereyaan ah oo xabsi loogu xukumay geerida Soomaali tahriibayaal ahaa
Lix qof oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Eritereya ayaa lagu xukumay xabsi sanado ah, kooxdan ayaa ahaa kuwii soo abaabulay doonidii bada ku degtay sanadkii 2013 oo ay ku dhinteen Soomaali iyo dad u dhashay Eritereya. Kooxda la xukumay ayaa lagu soo oogay inay iyagu sabab u ahaayeen musiibadii ay ku degtay Dooni ka […]
Dowladda oo sheegtey in ay gacanta ku hayso degmada Marka
Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Gen. Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo weheliyo Wasiirka Warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa si wadajir ah saxaafadda uga warbixiyey wararkii u danbeeyey ee degmada Marka, kadib markii maamulkeeda uu laba jeer u kala wareegay Dowladda iyo al-Shabaab 24 saac ee u danbeeyey. Wasiir Diini ayaa sheegay in Ciidamadda Dawladda […]